BEGONIA WELIGIIS CAWSKA UBAXA CAWSKA AH: SAWIR IYO FAAHFAAHIN, BEERID, DHALMO IYO DARYEEL OO KU YAAL BERRINKA BANNAAN IYO GURIGABA SIDA GURI GURI - GURI, GURI
Terry waa laga bilaabo ubadka dhashay ubax: sharaxaad la sawir, sii kordhaya guriga iyo ubaxyada iyo dhibaatooyinka suurtagalka ah
Begonia waa warshad caan ah oo loogu talagalay beeralayda waayo-aragnimo leh iyo kuwa jecel ubaxa.
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah sababaha astaamahani ay kala duwan yihiin noocyo kala duwan oo laga bilaabo dhalashada.
Ku saabsan mid ka mid ah - begonias ee weligeed ubax - iyo sifooyinka daryeelkeeda waxaa lagu sharxay si faahfaahsan qodobkan.
Sidoo kale qodobka waxaan ku faahfaahin doonaa faahfaahinta astaamaha ubaxa, shuruucda daryeelka, iyo sidoo kale waxaan baran doonaa hababka dhalmada.
Begonia weligay terry ubax - mid ka mid ah noocyada badan ee qoyska Begonia. Noocyadaas, marka loo eego, waxay leeyihiin noocyo badan oo kala duwan oo dherer ah, midabka caleen, cabbirka iyo tirada inflorescences. iyo xuduudaha kale. Begonia waa warshad qashin ah, waxay si fiican u koraan labada xaaladood ee gudaha iyo dibadda.
Laga soo bilaabo magaca ay soo socoto in dhirta ubaxyada muddo dheer. Tani waa run, iyada oo aan loo eegin in lagu beeray ubax ama ubax, taas oo ah wax aan faa'iido lahayn noocyada kale. Dabcan, ubax dheer waxaa suurtogal ah oo kaliya haddii begonias la siiyo daryeel habboon.
Halkaan waxaad ka arki kartaa sawirrada gabadha jiifta ee weligeed ah:
Haddii aad go'aansato inaad bilowdo taranta iyo koritaanka begonias, waxaad ku bilaabi kartaa dhirta Elatioor. Aragtida noocan ah waxay u muuqataa mid cajiib ah! Laakiin marka hore waxaad u baahan tahay inaad wax dheeraad ah ka ogaato buuggan ubaxan. Akhri:
Lush iyo hibo cajiib ah Elatior - dhammaan siraha ku saabsan dhirta.
Sidee loo siiyaa daryeel wanaagsan oo loogu talagalay dhalinyarada Elatior?
Talooyinka wax ku oolka ah ee taranta abuurka ee curonia Elatioor abuurka iyo gooyn.
Tilmaamaha lagu beero sariir
Geedo Begonia ah oo la dhigo godadka horay loo diyaargaroobey iyo qoorta lagu shubay, qiyaastii 2 sentimitir.
Marka beeritaanka, ka tago ugu yaraan 10 sentimitir inta u dhaxaysa geedo. Haddii aad si dhakhso ah u soo saartaan, geedaha sii kordhaya ayaa midba midka kale yimaada.
Daadi ceelasha dhulka.
Quudinta ugu horeysa waa in la sameeyaa bacriminta nitrogen todobo maalmood ka dib markii la beero, laba jeer oo keliya oo kala duwan 10 maalmood. Shub bacriminta inta lagu jiro waraabinta.
Begonia waxaa lagula talinayaa in lagu beero khadka hore ee sariirta ubaxa. Ubaxa ayaa u muuqda mid si fiican u iftiimaya haddii ubaxa lagu beeray halos badan. Sawirro sawir leh noocyo kala duwan oo kala duwan oo dhirtaas ah waa hab kale oo loo sameeyo beerta ubaxa xayndaab iyo asalka.
Waa muhiim: inkastoo thermophilic, geedka ma u dulqaadanayo qorraxdu si toos ah! Xalka ugu fiican waa in la dhigo geedo ku jira penumbra: halkaa oo ay heli doonaan kuleyl ku filan waxana laga ilaalin doonaa gubashada.
Ciid Ciid wanaagsan waa mid aad muhiim u ah marka beerashada begonias: geedka ma qaadanayso xidid dhulka, taas oo aan jirin nafaqooyin ka tagay. Jilaalka carrada ah ee lagu hayo biyaha ayaa sidoo kale ka hortagi doona ubax.
Ground waa in ay noqoto mid bacrin ah, wax yar oo acid ah iyo dabacsan. Marka diyaarinta ciidda waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo peat, humus ama ciid.
Daryeelka Guriga iyo Daryeelka
Qoyaan Qoyaan, raaxo leh begonias, waa 50% ama ka sareeya.
Marka laga hadlayo begonias sii kordhaya ee aqalka ku yaal inta badan waa in ay la tacaalaan dhibaatada huurka qoyan. Si looga hortago tan si xun u saameeya ubaxa, waxaad ku dari kartaa weel biyo leh daaqada daaqada ee dhererka.
Qaab kale: geli begonia digsi leh qadar yar oo biyo ah - uumiga ayaa badbaadin doonta ubaxa bilawgii hore.
Waraabinta Waqtiga ugu wanaagsan ee laga bilaabo dhalinyarada begonias - saacadaha subaxda iyo habeenkii. Biyaha waraabinta waa inay noqdaan kuwo diiran oo jilicsan, waa in la difaacaa maalinta ka horreysa maalinta.
Waxaa la rumeysan yahay in baahida loo qabo in biyaha laga bilaabo, haddii ay qalalaan 1-2 centimeter oo ciid ah. Xilliga xagaaga, dhirtu waxay u baahan tahay hodan, laakiin ma ahayn waraabin xad dhaaf ah, haddii kale waxay dhiman doontaa. Xilliga jiilaalku waa mid dhexdhexaad ah.
Digniin: Begonia laguma buufin karo! Tani waxay dhalinaysaa dhibco caleenta geedka.
Bacriminta. Labo todobaad kasta geedo waa in la bacrimiyo leh bacriminta adag ee dhirta ubax, ka dibna begonia ayaa Bloom muddo dheer iyo fadlan isha ee gardarrada.
Dib u noqoshada Begonia ma aha mid caado ah in la soo celiyo inta badan, sida growers ubax badan oo loo isticmaalo in la sameeyo. Transplanting waxaa lagula taliyaa keliya kiisaska marka dhirta ay noqoto mid dhoobo ah. Sidaa darteed, waxaa la doorbidi karaa xitaa marka laga beerto si loo dhigo ubaxa ee weel weyn, kaas oo uusan ku noqon karin.
Dhamaan faahfaahinta ku saabsan daryeelka ee ubadka barooranaya waxaad ka heli doontaa maqaalkan.
Marka koritaanka begonias, growers inta badan waxay la kulmaan dhibaatooyinka soo socda:
caabuq fungal ah;
Ka hor inta beerto begonias ee ciidda, waxaad u baahan tahay inaad hubiso abuurka for shilintakuwaas oo ah sidayaal ah caabuqyo kala duwan. Walxaha kiimikada, sida Anti-mite ama Fufanon, ayaa inta badan loo isticmaalaa si loola dagaallamo shilinta. Sida hab kale oo macnaheedu yahay waxaad isticmaali kartaa saabuunta saabuunta ama tubaakada, taas oo lagu dabaqo qaybta hoose ee geedka. Daadinta waa in la sii wadi doonaa illaa dhammaadka dhamaystiran ee dulinka.
Begonias sidoo kale waxay u nugul yihiin cudurada fangas. Xaaladaha noocaas ah, ciidda waa in lagu daaweeyaa iyadoo la adeegsanayo qalab gaar ah oo lagu iibiyo dukaamada qalabka. Si kastaba ha ahaatee, khatarta ugu weyn ee begonias waa caarada budada ah, oo ka muuqata geedka qaabka lakabka. Cudurkan waxaa sababa qoyaan aad u sareeya. Isticmaalka fungicides waxay kaa caawineysaa inaad u sheegto xishoodka xagta udugga.
Ka hor inta aan la bilaabin beeritaanka, begonia waxaa la keenaa waddada, si tartiib tartiib ah u kordhiya waqtiga adag. Sidaas darteed warshadu way sahlan tahay in la isticmaalo xaaladaha dibadda.
Si loo beero geedo ee dhulka u furan yahay ma aha ka hor June, marka muddada guga dhaxan doonaa. Xilligan xagaaga waxaa la arki doonaa inflorescences ugu horeeya.
Flowerbed leh begonias waa in si joogto ah loo dabciyo loona nadiifiyaa haramaha. Waxay kicin karaan infakshan waxayna si fudud u dhali karaan muuqaalka ubaxa.
Waa muhiim: waxaa lagama maarmaan ah in si taxaddar leh loo daboolo si aanay u dhaawacin nidaamka xididka ee ubaxa.
Begonia waxaa lagu faafin karaa labo siyaabood.:
Habka ugu horeeya waa waqti aad u badan, sidaas darteed laguma talinayo bilowga.
Waa caado ah inay abuurto abuurka bilaha ugu horreeya ee jiilaalka ee weel leh ciidda bacrin ah.
Haddii miraha yar yihiin, waxaad ku dari kartaa ciid; ka dibna si siman ayay u degi doonaan dhulka.
Ka dib markii la beero, miraha waa in lagu daboolaa dhalada ama warqad, taas oo u ogolaanaysa qorraxda. Heerkulka taangiga waa inuu ahaado qiyaastii 21-22 digrii.
Kondhomka soo baxa ayaa la saaraa, waraabinta waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu buufinayo ciidda.
Laba toddobaadyo ka dib, marka caleemaha ay samaystaan, muraayadda ayaa la saaraa.
Marka 3 caleemo ka muuqdaan asliga ah, begonia waxaa lagu beeray karaa dheriyada.
Dhaafida adoo isticmaalaya gooynta waxay u baahan tahay dadaal yar, oo la soo saaray guga.
Xuubka curonia ayaa la gooyaa xagal, isagoo ka tagaya 3 buug oo ku qoran.
Waa muhiim: Ka hor inta aan la beeri, jirida waa in la nadiifiyaa iyadoo la daaweynayo gooyo dhuxusha.
Ka dib markaa, jarida hoosta jilicsan ayaa la dhigayaa dhulka waxaana lagu daboolay polyetylen ama maryo leh godad.
Qiyaastii bil gudaheed, marka gooynta xididdo, dharka ayaa la saaraa, oo curonia waxaa lagu fadhiisiyaa dheriyo gooni ah.
Begonia waxay ka cabsanaysaa cimilada qabow, sidaas awgeed jiilaalka waxaa laga beddelaa sariirta ubaxa ilaa dheriga qolka. Daryeelka ubaxa guriga waa ka duwan yahay daryeelida warshad. dhulka banaan. Cabbitaanka dhexdhexaadka ah, iftiinka wanaagsan iyo quudinta ayaa ka caawin kara kuwa bilawga ah inay jiilaalka si guul leh u gutaan.
Xaaladaha intooda badan, way sii socotaa inta uu gurigu jiro. Haddii tufaaxu hoos u dhacaan, ma jirto sabab loo walwalo: Waqti ka dib, marxaladda ayaa mar labaad lagu dabooli doonaa burooyinkeeda.
Sida aad u arki karto, begonia waa warshad aan la qabin, oo daryeesho ma aha mid aad u adag in ay si weyn ugu farxi doonto dadka cusub. Dhamaan waxyaalaha loo baahan yahay si ay u koraan ubax qurux badan waa in la abuuro shuruudo raaxo ah iyada oo la raacayo talooyinka kor ku xusan, ka dibna waxay si dhab ah uga mahad celin doontaa milkiilaha ubax dheer iyo jilicsan!